Wasiir Dhabancad: Waxaan ka hortageynaa in bulshada lagu wareeriyo hannaan doorasho aan weli laga heshiin (dhegayso) – Radio Daljir
Wasiir Dhabancad: Waxaan ka hortageynaa in bulshada lagu wareeriyo hannaan doorasho aan weli laga heshiin (dhegayso)
Oktoobar 19, 2019 7:52 g 0
Digreeto ka soo baxay xafiiska Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha Puntland, Wasiir Maxamed Dhabancad, ayaa lagu sheegay in illaa amar dambe deegaanada Puntland aan laga furan karin wax xafiisyo siyaasadeed ah, sida kuwa ururada siyaasada heer fadaraal ayna furanayaan shaqsiyaad ka tirsan xildhibaanada Dowladda Fadaraalka Soomaaliya (DFS).
Qoraalka ayaa jawaab u ah xafiiska heer fadaraal ee Xildhibaan Jamaal Xasan ahna Wasiirka Qorsheynta DFS uu ka furtay degmada Dhahar uguna magac-daray “Xafiiska Xiriirka & Adeegga Bulshada ee Xildhibaan Jamaal M Xasan.”
Waa xafiiskii ugu horreeyey ee noociisa ah oo laga furo deegaanada Puntland, waxaana la furay ayada oo aan Soomaaliya weli laga hirgelin hannaan sharci doorasho oo ay ku mideysanyihiin DFS iyo maamul goboleedyada dalka, ayna sii xoogeysanayaa khilaafka u dhexeeya Villa Somalia iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
Doorashada heer fadaraal ee Soomaaliya ayaa waxaa hadda ka harsan waqti ka yar sannad iyo bar.
Wariye Xasan Heykal oo ku sugan Daljir Bosaaso ayaa wasiirka waxa uu ka waraystay wareegtada ka soo baxday xafiiskiisa iyo waxa uu daaranyahay furitaanka xafiisyada Garoowe iyo Dhahar ee Xildhibaanada Puntland ee heer fadaraal.
Hoos kaga bogo waraysiga
Halkan riix wareegtada
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20353
RW Abiy Axmed oo heshiis biloow ah dhexdhigay maamulada Soomaalida iyo Canfarta (dhegayso)
Hay’adda lacagta aduunka ee IMF oo taageertay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya